ပရိုမိုးရှင်း မရှိဘူးလား ဆိုပြီး အဲ့လို စိတ်ဆိုးနေတဲ့အသံကြီးနဲ့ လာလာမမေးနဲ့
ဒီလိုလေးမေး.. မင်မင်တို့ရေ.. Acer laptop လေးဝယ်ချင်လို့ပါ..
ပရိုမိုးရှင်းလေးများရှိမလားဟင်. အဲ့လိုလေးမေး.???? ဟီး..
အပိုတွေမပြောတော့ဘူး ရှိတာပေါ့.. နည်းနည်းတောင်နောက်ကျနေလို့ SLN ရဲ့ ထာဝရချစ်ဖန်တွေစိတ်ဆိုးနေကြပြီလား မသိ..
ဒါကြောင့် ချစ်ဖန်တွေကိုချော့တဲ့အနေနဲ့ ဒီလ မှာ cash back တွေအများကြီးပြန်ပေးထားတဲ့အပြင် ခုလို ဒေါ်လာဈေး တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်လာဈေးကို ဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြန်မာငွေကျပ်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာမို့ စိတ်ဆိုးပြေလိုက်ပါတော့လို့ မင်မင်ကတောင်းဆိုပါတယ်နော်
ဒါကတော့ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးထားတဲ့ မော်ဒယ်တွေနဲ့ ရောင်းချပေးမဲ့ဈေးတွေပါ..
Aspire ES1-432(Celeron) – 439,000 Kyats
(Normal Price - $ 299)
Aspire E5-476(i3)8th gen – 629,000 Kyats
(Normal Price - $ 449)
Aspire E5-476G(i3)8th gen – 699,000 Kyats
(Normal Price - $ 509)
Aspire E5-576G(i3)8th gen – 715,000 Kyats
(Normal Price - $ 519)
Aspire E5-576G(i7)7th gen(HD) – 989,000 Kyats
(Normal Price - $ 699)
Aspire E5-576G(i7)7th gen(FHD) – 999,000 Kyats
(Normal Price - $ 719)
ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ကနေ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ဖြစ်ပါတယ်.. ✴ Acer Products များကို Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd မှ မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင် တင်သွင်းဖြန့်ချီပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ Computer ဆိုင်ကြီး ( Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd ၏ Partner Shops ) များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
✴ P.S : Customer များကို Acer Product များ ဝယ်ယူလျင် ရွှေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီ ပစ္စည်း ဟုတ်မဟုတ် ( Company Seals ပါမပါ ) သေချာစီစစ်ပြီး ဝယ်ယူစေလိုပါသည်။ ✔???? ✔???? Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd မှ တရားဝင် တင်သွင်းထားသော Product များအတွက်သာ Warranty ခံစားခွင့် ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဆင်တူယိုးမှား ✖️သတိပြုစေလိုပါသည် ????✌ )